Justin Bieber ရဲ့ မိခင် သို့မဟုတ် အပြင်းထန်ဆုံး မုန်တိုင်းတွေထဲက အကြံ့ခိုင်ဆုံးသောမုန်တိုင်းမယ် - YOYARLAY Digital Media and News
အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အတိတ်ဆိုးပါရှင်။ ဘာတွေဖြစ်နေ ဖြစ်နေခဲ့မှန်းလဲ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ မသိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒါက ကျွန်မရဲ့ဘဝပဲလေ။ ဘာမှတတ်နိုင်ခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲ။ အရမ်းငယ်သေးတဲ့ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသန့်စင်တော့ဘူးလို့သိလိုက်ရတဲ့အသိဟာ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မယုံကြည်မှု လေးစားမှုတွေပျောက်ဆုံးသွားကုန်စေခဲ့တယ်။ တန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်လို့ ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ဘာအလုပ်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတော့ ခေါင်းထဲကို prostitute (ပြည့်တန်ဆာ) လုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့အတွေးအထိ စဉ်းစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ကျွန်မအတွေးထဲမှာက ငါဟာ သန့်စင်တော့တာမှမဟုတ်ပဲ..ကလေးဘဝထဲက စင်ကြယ်မှုပျောက်ဆုံးပြီးသားငါဟာ ဘာမှထူးပြီးခြားနားသွားမှာမဟုတ်ပဲ.ဒီလိုတွေအထိ တွေးခဲ့ဖူးခဲ့ပါတယ်….”
ဒီစကားတွေက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ကမ္ဘာကျော်လူငယ်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Justin Bieber ရဲ့ မိခင် Pattie Mallette ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့တဲ့ သူမရှင်သန်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ဘဝအကြောင်းစကားတွေထဲက ကောက်နှုတ်ချက်စကားအချို့ဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့် လူတွေကတော့ တောက်ပလင်းလက်နေတဲ့ကြယ်ပွင့်တွေကိုပဲ မြင်တတ်ကြတာပါ။ အဲဒီ့ကြယ်ပွင့်လေးတွေနောက်မှာ ကြယ်လေးတွေတောက်ပလာအောင် အံ့ချီးဖွယ်ရာပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သူတွေကိုတော့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ မြင်ခဲကြတယ်။ Pattie Mallette ကတော့ ထိုအထဲကမှ တကယ်ကိုအံ့ချီးဖွယ်ရာကောင်းလွန်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ သူမရဲ့ဘဝဟာ ကြမ်းတမ်းခက်ခဲလွန်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားထက်တောင် ပိုကြမ်းပိုခက်ခဲခဲ့ပေမယ့် သူမဟာ Single Mother ဘဝနဲ့တောင် ထပ်ပြီးတစ်ကိုယ်တော်လျှောက်လှမ်းကာ သူမရဲ့သားလေး ဂျက်စတင်ဘီဘာကို အတောက်ပဆုံးကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သူပါ။
သူမရဲ့ rocky path ကြမ်းတမ်းခက်ခဲလှတဲ့ဘဝခရီးလမ်း
Pattie Mallette ဆိုတဲ့ သူမဟာ ကနေဒါသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ အသက် ၃ နှစ်အရွယ်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကို စခံစားခဲ့ရတယ်။ သူမရဲ့ ကလေးဘဝဟာ Sexual Abuse လို့ခေါ်တဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရမှုတွေ Violence တွေနဲ့ပြည့်နှက်လို့နေခဲ့တယ်။ ဒီလိုစော်ကားခံခဲ့ရမှုမျိုးကို သူမအသက် ၁၄ အရွယ်လောက်အထိကို ခံစားခဲ့ရတယ်။ကျူးလွန်သူ Offenders တွေဟာ အမျိုးသားကလေးထိန်း၊ သူမသူငယ်ချင်းရဲ့အဖိုး နဲ့ သူမထက်အသက်အနည်းငယ်သာကြီးတဲ့ သူမရဲ့သူငယ်ချင်းတွေအထိပါဝင်ကြတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ အသက် ၁၄ နှစ်နဲ့တောင်မပြီးသေးပဲ ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာ Date Rape လို့ခေါ်တဲ့ ချိန်းတွေ့ကြရာမှ ဆေးခတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုမျိုးကို ထပ်ခံစားခဲ့ရပြန်တယ်။
အရမ်းငယ်သေးတဲ့ကလေးဘဝကနေ ဘ၀တောက်လျှောက်မှာ အရမ်းကိုရှက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ သူမကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်။
သူမရဲ့ မိဘနှစ်ပါးဟာလဲ အဆင်ပြေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမျိုးမဟုတ်ခဲ့ကြဘူး။ သူမရဲ့ ဖခင်နဲ့ မိခင်ဟာ သူမ အသက် ၂နှစ်အရွယ်မှာကတည်းက ကွာရှင်းခဲ့ကြတယ်။ သူမရဲ့ မိခင်ဟာ သူမ အသက် ၆ နှစ်မှာ အိမ်ထောင်သစ်ထူခဲ့တယ်။ သူမအသက် ၉ နှစ်အရွယ် သူမကျောင်းကပြန်ရောက်လာတဲ့တစ်နေ့မှာ အိမ်မှာသူမရဲ့ဖခင်အရင်းရောက်နေတာတွေ့ရတော့ သူမအရမ်းပျော်ခဲ့ဖူးတယ် ထိုနေ့ကပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လအနည်းငယ်အကြာမှာတော့ နှလုံးရောဂါနဲ့ သူမရဲ့ဖခင်အရင်းဆုံးပါးသွားခဲ့တယ်။
သူမရဲ့ စော်ကားခံရမှု အနိုင်ကျင့်ခံရမှုပြည့်နှက်နေတဲ့ဘဝနဲ့ ဝေးသထက် ဝေးဖို့၊ မေ့ပျောက်နိုင်ဖို့ သူမဟာ သူမရဲ့ ဝါသနာမှာ အချိန်ပြည့်ပေးဆပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာတင် သူမဟာ အရမ်းကိုကြံ့ခိုင်သန်မာသူတစ်ယောက်ဆိုတာ သတိပြုမိပါတယ်။ ဒီလိုအဆိုးဝါးဆုံးသော ခါးသီးမှု အိမ်မက်ဆိုးတွေထဲကနေ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် ကလေးအရွယ်နဲ့တင် ရုန်းကန်ကြိုးစားနိုင်တာ အံ့ဩချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့… ဒါပေမဲ့တွေ သူမဘဝမှာ ထပ်လာခဲ့ပြန်တယ်။
သူမရဲ့ဝါသနာက အဆိုအက၊သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ ရှိသမျှသော နေ့ည အဆိုအက၊သရုပ်ဆောင်သင်တန်းအားလုံး သူမတက်ခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ကြိုးစားမှုဟာ အရာထင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ အဆိုနဲ့ သရုပ်ဆောင်အရည်အချင်းတွေအတွက် ဆုတွေများစွာရရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာ Toronto-based talent agency က agent တစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့အရည်အချင်းကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့တယ်။ သူမကို အေဂျင်စီက လက်ခံလိုက်သော်လည်း စနေ တနင်္ဂနွေတိုင်း Toronto ကို နာရီအတော်များများအချိန်ယူပြီးသွားရမယ့်ခရီးတွေအတွက် သူမရဲ့မိဘတွေက သူမကို အားမပေးနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဒီလိုအခွင့်အရေးကောင်းကို သူမလက်လျှော့ခဲ့တယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျ ညစ်ညူးစိတ်ပျက်နေတဲ့ သူမရဲ့အရင်ဘဝကို ပြန်ရောက်သွားပြန်ပြီး သူမ ဆေး စစွဲခဲ့တယ်။ အရက်စွဲခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်တောင် out of control ဖြစ်နေလဲဆိုရင် ကျောင်းမီးရှို့မှုမှာ သူမဟာ သံသယရှိသူအဆင့်ထိဖြစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီ့အချိန်တွေဟာ သူမအသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ပေါ့။
အသက် ၁၅ နှစ်မှာပဲ Justin Bieber ရဲ့ဖခင်လောင်းလျာ Jeremy Bieber နဲ့ စတွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ အသက် ၁၆ နှစ်မှာ အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာပြီး အလစ်သုတ်သမား Drug Dealer ဆေးမှောင်ခိုသမားဘဝနဲ့ အသက်မွေးခဲ့ပြန်တယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျမှု၊ အထီးကျန်မှု၊ သက်သေ suicide လုပ်ဖို့ကြံစည်စိတ်ကူးနေခြင်းတွေနဲ့ လုံးခြာလည်နေခဲ့တယ်။
အသက် ၁၇ နှစ်မှာတော့ လက်လျှော့အရှုံးပေးဖို့ တကယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကုန်တင်ကားကြီးရှေ့ကို ပြေးသွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို သက်သေဖို့ တကယ်ကိုကြံစည်အားထုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကုန်တင်ကား ဘရိတ်ဖမ်းတာမီသွားပြီး သူမ အသက်ဘေးလွတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံပို့ခံလိုက်ရတယ်။
သူမရဲ့ကံဆိုးမှု၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ဘဝခရီးဟာ ဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကဆင်းလာပြီးတော့လည်း သူမရဲ့ ဒုံရင်းဘဝကိုပဲ သူမပြန်ရောက်ပြန်တယ်။ Justin Bieber ရဲ့ ဖခင်အလောင်းအလျာ Jeremy Bieber နဲ့ပြန်တွဲတာအပါအဝင်ပေါ့။ အသက် ၁၈ နှစ်၊ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံက ပြန်ဆင်းအပြီးခြောက်လအကြာမှာ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တယ်။ Justin Bieber လေး သူမဝမ်းထဲကို စရောက်လာတယ်။ အဲဒီ့မှာ သူမရဲ့မိခင်ဟာ သူမကို အိမ်ပေါ်ကမောင်းချလ်ိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူမဟာ unwed mothers တွေလို့ခေါ်တဲ့ လက်မထပ်ထားသော မိခင်တွေအတွက် Stratford home ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်။ အားလုံးက abortion လုပ်လိုက်ဖို့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလိုက်ဖို့ပြောပေမယ့် သူမလုံးဝယတိပြတ်ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။
အင်တာဗျူးမှာ ဘာကြောင့်ကိုယ်ဝန်မဖျက်ချပဲ မွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုပြီး သူမကိုမေးတော့ သူမဘယ်လိုပြန်ဖြေခဲ့သလဲဆိုရင် “ When I was pregnant, I knew it was not just an option. I knew I was meant to have Justin.”
“ ဒါဟာ ဖျက်ချမယ် မဖျက်ချဘူးဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုတာ သိကတည်းက ကျွန်မဟာ Justin ကို မွေးဖွားရမယ့် ကံကြမ္မာပါလာပြီးသားလို့ပဲ ခံယူခဲ့တယ ္” ဆိုပြီး သူမပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ အဲဒီ့အချိန်အခါကာလမှာ ပျက်စီးနေတယ်လို့ပြောရမယ့် ဆယ်ကျော်သက်မိ်န်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထား ခံယူချက်တွေဟာ မထင်ထားမိလောက်အောင် အံ့ဩချီးကျူးဖို့ကောင်းပါတယ်။ လူ့အသက်တစ်ချောင်းဆိုတာကို သူမကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ သူမ တကယ်တော်ပါတယ်။
ကလေးရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သူမနဲ့ Justin Bieber ရဲ့ဖခင်ဟာ သူတို့ relationship ကိုဆက်ထိန်းသိမ်းဖို့တော့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးဆယ်လအရွယ်မှာပဲ ပြတ်တောက်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဂျက်စတင်ရဲ့ဖခင်ဟာ တခြားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ထူထောင်ပြီး ကလေး၂ဦးရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဂျက်စတင်မှာ ဖအေတူ အမေကွဲမောင်နှမ ၂ယောက်ရှိပါတယ်။
သူမဟာ Justin Bieber ကို အစိုးရအထောက်အပံ့ဝင်ငွေနည်းသူများအတွက်အိမ်ယာမှာ စောင့်ရှောက်မွေးမြူ raise လုပ်ရင်းနဲ့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ခဲ့တယ်။ သူမတစ်ခုကံကောင်းတာက သူမရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတစ်ယောက်ဟာ Justin ကို အခမဲ့နှစ်ချီထိန်းပေးပြီး သူမကို ကျောင်းပြန်တက်ဖို့အားပေးခဲ့တာပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ Websites ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းပညာနဲ့ သူမ Diploma ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဒီလိုတွေနဲ့ပဲ သူမဟာ Justin ကို ဒုက္ခ သုက္ခမျိုးစုံခါးစည်းခံပြီး Single Mother ဘဝနဲ့ မွေးမြူစောင့်ရှောက်ခဲ့ရပါတယ်။ သူမကတော့ ဒါတွေကို ဒုက္ခတွေလို့မြင်တဲ့အချိန်မရှိသလောက်ရှားပါတယ် သားမျက်နှာ သားအမူအရာတွေမြင်ရင် သူမအတွက်နိဗ္ဗာန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။
သူမရဲ့သား Justin Bieber ဟာ သူမရဲ့ ဂီတသွေးပါလာခဲ့တယ်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲက ဂျက်စ်စတင်ဟာ အဆိုဝါသနာပါမှန်းကို သူမသိခဲ့တယ်။ သားရဲ့ ဝါသနာကို သူမအကောင်းဆုံးအားပေးခဲ့တယ်။သူမ သားလေးလိုချင်တဲ့ လိုအပ်တဲ့ ဂီတနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းမှန်သမျှဝယ်ပေးနိုင်အောင် သူမကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အသက် ၁၂ပြည့်လာခဲ့တဲ့ သူမရဲ့သားလေး Justin Bieber ဟာ “Stratford Star Talent Show” မှာ R & B artist Ne-Yo ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “So Sick” ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ ဝင်ပြိုင်တာ ဒုတိယဆုရတော့ သူမအရမ်းကိုပျော်ရွှင်ပီတိဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် သူမဟာ သူမရဲ့သားလေး Justin သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ Video ကို Youtube မှာ သူမရဲ့မိဘ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်ပိုင်းမှာလဲ သား Justin သီချင်းဆိုတဲ့ video တွေကို ဆက်ဆက်ကာတင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူမရဲ့သားလေး Justin ရဲ့ အဆိုအရည်အချင်းကို လူသိတဖြည်းဖြည်းများလာခဲ့တယ်။
သူမရဲ့ Youtube မှာတင်ခြင်းကနေကပဲ အခြေခံပြီး Justin ရဲ့အဆိုအရည်အချင်းပါရမီကို Talent Agent တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Scooter Braun ရဲ့အာရုံကို ဖမ်းစားသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ။် အဲဒီ့ကနေပဲစပြီး Justin Bieber ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကျော ္Pop အဆိုကြယ်ပွင့် တစ်ပွင့်စပြီးတောက်ပပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။ Justin Bieber ရဲ့ ပထမဆုံး manager ဟာလဲ သူမပါပဲ။
ယခုဆိုလျှင် သူမဟာ သူမနဂို ဝါသနာပါရာ အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်လုပ်နေနိုင်ပါပြီ။ စာရေးတယ်။ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူလုပ်တယ်။ အင်တာဗျူးတွေဖိတ်သမျှ သွားရောက်ပြီး သူမရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေဝေမျှပြောပြပြီး လူတွေကို စိတ်ခွန်အားပေးတယ်။
သူမရဲ့ ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ဘဝခရီးအကြောင်းတစ်ခုလုံးကို အသေးစိတ်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် သူမရေးခဲ့ပါတယ်။ နာမည်က “ Nowhere But Up” တဲ့.. ကိုယ်နားလည်သလိုဘာသာပြန်ရရင် “ ဘယ်နေရာမှသွားဖို့မရှိဘူး ဒါပေမဲ့ အပေါ်ုတော့တက် “ လို့ ဘာသာပြန်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ Nowhere But Up စာအုပ်ဟာ The Best Seller” စာရင်းဝင်စာအုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ လူတွေဖတ်လေ့ဖတ်ထရှိကြတဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ အကြမ်းတမ်းဆုံးသော ဘဝခရီးတိုက်ပွဲကို အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အနိုင်တိုက်ခဲ့သော အရှုံမပေးခဲ့သော သူမရဲ့အကြောင်း အသေးစိတ်ရေးထားတဲ့ အဲဒီ့စာအုပ်ကတော့ ကိုယ့်အမြင်မှာတော့ ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်တဲ့ စာအုပ်လို့ယူဆပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လို့မြင်ပါတယ်။ မဝယ်ဖြစ်သေးပါဘူး။ ဝယ်ဖြစ်မှာပါ။
အဲဒီ့စာအုပ်ကရတဲ့ ငွေတွေနဲ့ သူမဟာ Nowhere But Up Foundation ကို ထူထောင်ထားပါတယ်။ အဲဒီ့ ဖောင်ဒေးရှင်းက ဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ Single Mothers တွေ Unwed Mothers တွေ၊ ဆေးစွဲ အရက်စွဲနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတွေကို ကူညီပေးပါတယ်၊ Counseling တွေလုပ်ပေးပါတယ်။ လမ်းမှန်ကို ပြန်ဆွဲတင်ပေးပါတယ်။
အင်တာဗျူးတစ်ခုအထဲမှာ သူမကို Interviewer ကမေးပါတယ်..သူမနဲ့ဆင်တူတဲ့ဘ၀တွေဖြတ်သန်းနေရတဲ့မိန်းကလေးတွေကို ဘာပြောချင်ပါသလဲ?ဆိုတော့ သူမက “ Just hold on. Never give up! “ လို့ပြောချင်ပါတယ်တဲ့။ အရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့အုံး လို့သူမဆိုပါတယ်။
ပြီးတော့ ပြောဖို့ကျန်တဲ့ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်လဲသဘောကျတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်တဲ့ “To Write Love On Her Arms” ရုပ်ရှင်ရဲ့ ထုတ်လုပ်သူက သူမပါပဲ။
သူမ သူမဟာ တကယ်ကို သိပ်တော်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး..မိခင်တစ်ဦး ! (*note: ဆယ်ကျော်သက် Justin Bieber ဟာ spotlight အောက်မှာ ဆိုးသွမ်းတဲ့လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်နေတော့ မေးစရာရှိပါတယ်။ သူ့အမေ ဘာမှမပြောဖူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်း။ အနောက်တိုင်းရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်သားသမီးကို ထိန်းကျောင်းဆက်ဆံပုံနှင့် အရှေ့တိုင်းထိန်းကျောင်းပုံနှင့် ကွာခြားပါကြောင်း။ )
ကိုယ့်ရဲ့ Justin Bieber ရဲ့ မိခင် Pette Mallette အကြောင်း ဒီစာဟာ Single Mothers တွေအတွက် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ခွန်အားဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Abortion (ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု) လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုတွေကိုလည်း လျော့နည်းပပျောက်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လည်း ဒီစာကိုရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous Previous post: အန္တရာယ် ကင်းကင်းနဲ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် အလှတရား (CRYSTAL TOMATO) လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် မခင်ရဲရူပါအေးနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
Next Next post: Facebook ကို uninstall လုပ်ပါက ဘက်ထရီစား သိသိသာသာ သက်သာ
ရုံတင်ပြသဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကား (၇) ကားကို Disney + Hotstar Streaming Platform ကနေ ပြသမယ်
Walt Disney ကုမ္ပဏီရဲ့ Streaming Service ဖြစ်တဲ့ Disney+Hotstar ဟာ အခုနှစ်ထဲ ရုံတင်ပြသဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကား (၇) ကားကို ပြသဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ Disney+Hotstar က Netflix၊ Amazon…
Published: July 1, 202010:37 am Updated: 10:49 am
ကပ္ပတိန်ဂျက်စပဲရိုးလို ဝတ်ဆင်ပြီး ဆေးရုံက ကလေးတွေကို တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ဂျွန်နီဒက်ပ်
ပင်လယ်ဓားပြဂျက်စပဲရိုးအဖြစ် ပရိသတ်တွေ တစ်ခဲနက်အားပေးခဲ့ရတဲ့ မင်းသားကြီး ဂျွန်နီဒက်ပ်ဟာ ဇာတ်ကောင်ဂျက်စပဲရိုး ပုံစံအတိုင်းဝတ်ဆင်ပြီး ကလေးဆေးရုံတစ်ခုက ကလေးတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကပ်ရောဂါအတွင်းမှာ Queensland Children’s Hospital က လူနာတွေကို ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်…
Published: June 23, 202011:35 am
ဟောင်ကောင်အက်ရှင် မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချမ်းက ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့က လော့အင်ဂျလိစ်မြို့အခြေစိုက် ရေဒီယိုတစ်ခုနဲ့ တွေဆုံစဉ်မှာ Rush Hour4ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးဖို့ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ပြီး နောက်နှစ်လောက်မှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်သွားနိုင်တယ် လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Post Views: 2,566